Wararka - Ma taqaan dhammaan noocyada sagxadda dhulka?
Dhulku waa shay dabaq ah oo aan fududayn in khaladaad laga sameeyo naqshadeynta iyo isbarbar dhigga, waxaana jira xulashooyin badan oo ah alaabta sagxadda, markaa maanta waxaan ku qaadan doonaa inaad fahanto noocyada dabaqyada la heli karo.
Maqaalkani wuxuu inta badan falanqeeyaa afarta dabaq ee caadiga ah:
Dabaqa Hardwood ee Injineerka ah (Parquet)
Dabaqa adag ee Hardwood
Dabaqa Laminate (Dabaqa Laminate)
Mid. Dabaqa Hardwood ee Injineerka (Dabaq ka kooban alwaax adag)
Nooc ka mid ah sagxad alwaax adag, oo inta badan ka kooban dhowr lakab oo looxyo ah (lakabka xirashada u adkaysta, lakabka qurxinta, lakabka sare ee cufnaanta sare, lakabka dheelitirka). In kasta oo qaybta ugu weyn ay tahay alwaax, way ka xasilloon tahay sagxadda qoryaha adag: maxaa yeelay sagxadda isku -dhafka ah ee qoryaha adag ayaa si gaar ah loo farsameeyay, ma laha dhibaatada qaab -dhismeedka fudud sida sagxadda alwaax -dhaqameedka adag. Marka la barbardhigo sagxadda alwaax -dhaqameedka ee adag, sagxadda isku -dhafan ee qoryaha adag waa mid khafiif ah oo adag, laakiin waxay leedahay ku -beddel kuleyl oo wanaagsan waana mid sahlan in la joogteeyo.
Ar Xirto adkaysi iyo cadaadis process Habka rakibidda fudud patterns Qaabab badan ④ Way fududahay in la daryeelo
ReWaxaan la soo koobi karin tWaa ay adag tahay, sidaa darteed cagtu waxay dareemi doontaa inay ka sii darayso. FloorsDhulka qaarkood ayaa isticmaali doona xabagta formaldehyde, markaa waxaa jirta dhibaato ka dhalankarta formaldehyde. Markaad dooranayso, waa inaad aragtaa isku -dheelitirka qiiqa ee formaldehyde. Nolosha: 25-40 sano (haddii si fiican loo dayactiro, waxaa la isticmaali karaa waqti dheer)
laba. Dabaqa adag ee Hardwood
Dabaqa qoryaha adag, magiciisa, ma aha wax adag in loo maleeyo in uu yahay dabaq ka samaysan alwaax, sidaa darteed wuxuu noqon doonaa mid bey'adda u fiican oo dabiici ah. Si kastaba ha ahaatee, dabeecadaha dabiiciga ah ee alwaax awgood, sagxadda laga sameeyey waxay noqon doontaa mid si sahlan u qaabeysan oo aan biyuhu ahayn. Xitaa haddii dadka badankiisu u maleeyaan in sagxadda qoryaha adag ay noqon doonto mid horumarsan, ceebahaheeda lama iska indho tiri karo.
RelativelyWaa mid aad u jilicsan, dareenka cagtana waxaa jeclaan doona dadka intiisa badan dhammaan noocyada dabaqyada ah. CauseSababtoo ah ma jiro qaab go'an, sagxadda oo dhan waa mid isku mid ah oo dhammaystiran, sidaa darteed sagxadda alwaaxda adag waxaa lagu “cusboonaysiin karaa” nadiifinta.
EasyWaa sahlan tahay in la xoqdo problemDhibaatooyinka qallooca ee ay keento ballaarinta kuleylka iyo foosha ayaa iyaduna ka sii daran ③Ma aha biyo -mareen oth Aboor cayayaanka iyo dhibaatooyinka mudnaanta leh requirements Shuruudaha dayactirka sare
Cimriga: 70 sano-100 sano
saddex. Dabaqa Laminate (Dabaqa Laminate)
Dabaqa wuxuu ka samaysan yahay alwaax adag oo jaban, waxaa lagu farsameeyaa fiber alwaax ah, ka dibna waxaa lagu cadaadiyey alwaax heerkulkiisu sarreeyo sida maaddada saldhigga ah, ka dibna waxaa lagu daboolay lakab qurxin ah, lakab aan qoyaan lahayn, iwm. Aad bay suuqa ugu badan tahay. Sababtoo ah waa mid raqiis ah oo aan u baahnayn dayactir aad u badan, waxaa u isticmaali doona guriga ama aagga xafiiska macaamiisha doonaya waxqabad kharash badan.
NeRaqli badan hardQallalka sare iyo iska caabinta abrasion xooggan patterns Qaababka kala duwan stabilityXasiloonida rakibidda wanaagsan, looma baahna in aad loo bixiyo dayactirka ⑤ Aad bay u sahlan tahay in la daryeelo, sagxadda iyo sagxaddu ma qarin doonaan wasakhda iyo wasakhda.
WillWaxaa jiri doona dhibaatooyin sida ka-soo-bax kadib finanka footCagtu waxay dareentaa dhib ③Tayadu waa mid aan sinnayn, way adag tahay in la helo dabaq aad u tayo sarreeya fHaddii hannaanka cabbirka uu aad u yaraado ama xaddiga xabagta uu aad u weyn yahay, waxaa jiri doona bey'ad aad u daran dhibaatooyin
afar. Dhulka Vinyl (dabaqa caagga ah)
Nooc dabaq ah oo si tartiib tartiib ah u kobcay tobankii sano ee la soo dhaafay. Dad badan ayaan wax badan ka aqoonin sagxadda dhulka. Markay timaaddo sagxadda vinyl, waxay la jaan qaadi doonaan maqaar dhulka ah, dhabooyin caag ah, iwm. Kaliya maahan inay ka welwelsan yihiin arrimaha ilaalinta deegaanka, laakiin waxay sidoo kale si ulakac ah u dareemi doonaan inay yeelan karto dhadhan culus. .
Laakiin dhab ahaantii, waxyaabaha ugu muhiimsan ee sagxadda balaastigga ah waa polyvinyl chloride, maado si aad ah loogu adeegsaday nolosheena. Tusaale ahaan, inta badan qalabka caafimaadku waxay isticmaalaan chloride polyvinyl.
Dabaqa balaastikada ah, oo sidoo kale loo yaqaan sagxadda PVC, ayaa si qumman ugu qaybsan Dhulka Vinyl Flooring (sagxadda caagga ah ee caadiga ah) iyo Dhulka Dhulka adag ee Vinyl Flooring (sagxadda caagga ah ee adag), iyo sagxadda caagga ah ee adag ayaa loo qaybiyaa WPC (sagxadda caagga ah ee alwaaxa) iyo SPC ( sagxadda caagga dhagaxa ah). Dabaqa) laba nooc, iyo labadan nooc, labadaba xagga ilaalinta deegaanka iyo tayada, SPC way ka fiican tahay:
BAbrasion u adkaysta oo cadaadis leh
①Waxaa laga baqayaa in lagu xoqo qalab fiiqan
Kuwa kor ku xusan waa noocyada dabaqyada ee suuqa ugu badan. Dhab ahaantii, waa wax aan macquul ahayn in la helo dabaqa leh qiime jaban iyo tayo wanaagsan, ma aha oo kaliya adeeg dheer, laakiin sidoo kale dayactir la'aan. Waxaad fahmi kartaa sagxad kasta iyadoo loo eegayo munaasabadda. Sifooyinka dabaqa: habka rakibidda, arrimaha deegaanka, haddii ay tahay biyo-la'aan ama qoyaan-caddeyn, iwm, oo ku saleysan dhammaan macluumaadka kor ku xusan, waxaan aaminsanahay inaan ku talin karo dabaqa ku habboon qof walba.